Rita, Writing for My Sake!: ရေချိုးဆိပ်
Posted by Rita at 1/20/2010 11:35:00 PM
I like that song so much.
Khin Wan also (သရုပ်ပေါ်အောင် ရေးသူကိုရော၊ ရုပ်လုံးကြွအောင် ဆိုပေးသူ)
ကျေးဇူးမမရီတာ.. အဲလိုသီချင်းမျိုးတွေ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်နားထောင်တုန်းက အဓိပ္ပါယ်ရဲ့ သုံးပုံ၁ပုံလောက်ပဲသိတယ်။
ကျေးဇူး ရီတာ... အိမ်ပြန်ရောက်မှ သေချာနားထောင်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကျော်ကာလက ဒီသီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟေသီ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဇန်မြင့်နဲ့ ဆူဒိုနင်နဲ့ အကြီးအကျယ် ငြင်းခုံကြတာ မှတ်မိသေးတယ်။
ဆူဒိုနင်က မပိုင်ဘဲနဲ့ ခြင်ရိုက်တာလေ။ သီချင်းထဲမှာ “ဆပ်ပြာကို ဆဲတာ” ဆိုတဲ့ စာသားပါတယ်။ အဲဒီ သီချင်းအကြောင်း ဇန်မြင့်ရေးတာကို ဆူဒိုနင်က “ဟားဟားဟားဟား.... ဆပ်ပြာကို ဆယ်တာပါ ဇန်မြင့်ရယ်၊ ဆဲတာ မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုပြီး (မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်ကနေ)မသိဘဲ သွားဝေဖန်မိလို့ ဇန်မြင့်က သီချင်းရာဇဝင်နဲ့တကွ၊ အထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ပြန်ရေးတားကို ဖတ်လိုက်ရတာ ကောင်းမှကောင်း။ ဒေါ်ရီတာတို့လို့ နောက်လူလေးတွေ မီလိုက်မယ် မထင်ပါဘူးကွယ်။း-)
ရီတာရေ... စာတွေလာဖတ်ပါတယ်။ သီချင်းလေးကိုလည်း ဖတ်သွားတယ်။ နားတော့ မထောင်ရသေးဘူး။ တကယ်ကောင်းတဲ့ စာသားတွေပဲ။ နောက်မှ နားထောင်ကြည့်မယ်။
မေးစရာလေးရှိလို့ ရီတာစာရေးတဲ့ အထဲမှာ "ဉ" နဲ့ သုံးထားတယ်နော်။ ပုံမှန်တွေ့နေရတာက "ဥ" နဲ့ပဲ တွေ့နေကြဖြစ်နေလို့။ ရီတာလည်း အကြောင်းမဲ့ သက်သက်ရေးတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အခုလို ရေးလဲဆိုတာလေးကို သိချင်လို့ မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်။
ဆောရီး ချက်ချင်း ပြန်ရေးမလို့ပါ။ မအားတာနဲ့။
ဉ နဲ့ ဥ ကတော့ ညကလေး=ဉ နဲ့ အက္ခရာအု=ဥ ကို ကွဲပြားစေချင်လို့ သုံးတာပါ။
ဥပမာ - ဉာဏ် ဆိုရင် မဖြစ်မနေ ဉ ကို သုံးမှ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသတ်တင်တဲ့နေရာတွေ စဉ့်အိုး ဆိုတာမျိုးမှာကျတော့ "စဉ့်" လို့ မရေးဘဲ "စဉ့်" လို့ ရေးရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ အက္ခရာအုကို အသတ်တင်တဲ့ ရေးထုံး မရှိတော့ မှားစရာ မရှိလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ် ဘလော့မှာ ရေးရင်တော့ "စဉ့်အိုး" ပဲ ရေးပါတယ်။ အပြင်မှာ ရေးရင်တော့ "စဉ့်အိုး" လို့ ရေးပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ဉ နဲ့ ဥရဲ့ တန်ဖိုးဟာ မတူတော့ search လုပ်ရာမှာ ကွာခြားသွားနိုင်လို့ပါ။
အဲဒါ ကိုယ့်ဘာသာ သိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ညီလင်းဆက်ကြောင့် သိတာပါ။ သူစရေးတော့ ကိုယ်လိုက်မရေးသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပဲ သူ့ post တစ်ခုမှာ တယောက်က မေးတာကို သူပြန်ဖြေတော့မှ search လုပ်ရာမှာ ကွဲပြားနိုင်တာကို သတိပြုမိတာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကိုယ်လည်း ကွဲပြားအောင် ရေးပါတယ်။
သူရှင်းပြထားတာကတော့ ပိုနားလည်လွယ်ပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလဲ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့် field မဟုတ်တော့ အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကို keyword လေးလောက်ပဲ ခေါင်းထဲထည့်ထားပါတယ်။ ခုလို ပြန်ရှင်းပြရမယ် ဆိုတော့ လူပြိန်းနည်းလောက်ပဲ ရှင်းနိုင်တော့တယ်။ သူ့စကားကို ပြန်ညွှန်းဖို့ကလည်း သူက အဲဒီအကြောင်းကို post တင်ပြီး ရေးထားတာ မဟုတ်ဘူး။ comment မှာ တယောက်ကမေးတာကို comment မှာပဲ ရေးပြီး ရှင်းထားတာ။
ဖြစ်ချင်တော့ zawgyi font အပြောင်းအလဲမှာ သူ့ comment ဟောင်းတွေ အကုန်ကြွသွားတယ်။ ဒီ့ထက်ပို စိတ်ဝင်စားရင်တော့ သူ့ကို တိုက်ရိုက်မေးကြည့်ပါ။
ကိုယ်တွေ့နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဥပမာ ပြောရရင် ဘာသာစကားမှာ စနစ်တကျ ရေးထုံးတစ်ခု မရှိတာဟာ (အပြင်မှာ မသိသာပေမယ့်) အွန်လိုင်းမှာ ရှာရဖွေရတဲ့အခါ အတော် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာနဲ့ ကြုံရပါတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာကို ဒီဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သတ်လို့ လေ့လာနေသူ၊ သုတေသနပြုနေသူ မဟုတ်တော့ ဒါဟာ ရေးကြီးခွင်ကျယ် မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ပြောလို့ရတာပေါ့။
ကိုယ့်စိတ်ကသိကအောက်က ဥပမာဆိုရင် you tube မှာ ဗမာ သီချင်း ရှာချင်ပြီ ဆိုရင် ဝိုင်ဝိုင်း လို့ (ဝလုံး အပြည့်) ရိုက်မိလိုက်တာနဲ့ ၀ိုင်ဝိုင်း လို့ (၀လုံး ထိပ်ပြတ်)နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ သီချင်းကို ရှာမရတော့တာမျိုး ကြုံဖူးတယ်။ ဒါက ကိုယ်က မြန်မာစာကို ဒီလို entertainment အတွက်ပဲ သုံးတဲ့သူမို့ ဒီလောက်ပဲ ရှိတာ။
အကယ်၍ တက္ကသိုလ်ကြီး တခုခုက ဗမာဘာသာစကားကို သုံးလို့ ဗမာအကြောင်း တခုခု research လုပ်နေသူဆိုရင် ပိုဆိုးမယ်။ (ဒါ ကိုယ်ဉာဏ်မီတွေးမိသလောက်ကို ရှင်းပြတာပါ)
တကယ်က သုတေသန ပြုရလောက်အောင် online မှာ ဗမာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အားကိုးအားထားပြုရလောက်စရာ site ရှိ မရှိ ကိုယ်မသေချာပါဘူး။ မရှိဘူး ထင်မိတာပဲ။
ဒါကြောင့်မို့ Myanmar Wiki ကို ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ လူတွေကို၊ Unicode ကို ကြိုးပမ်းကြတဲ့ လူတွေကို (ကိုယ့်အနေနဲ့ အဲဒါတွေသုံးလို့ professional အလုပ် လုပ်စရာ မလိုတဲ့တိုင်အောင်) ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ဒါကို emphasize လုပ်နေသူ မဟုတ်တော့ ပညာရပ်ကို ရှင်းမပြနိုင်ဘဲ ဆက်စပ်ရာကိုသာ ပြောလိုက်နိုင်တယ်။ ရှည်ပြီး ရှုပ်သွားလားတော့ မသိဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်စာလုံးပေါင်းတွေဟာ အမှား မကင်းပါဘူး။ မသိလို့မှားတာထက် သိရဲ့သားနဲ့ အလွယ်ရေးပစ်လိုက်တာမျိုးတွေတောင် ပါတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ရီမော တို့၊ ရီးစား တို့ ပေါ့။
Zawgyi font အပြောင်းအလဲမှာ သူ့ comment ဟောင်းတွေ အကုန်ကြွသွားတယ်။
တကယ်က comment system အပြောင်းအလဲမှာ ဖြစ်သွားတာ။
ရီတာရေ... အခုလို အသေးစိတ်လေး သေချာရှင်းပြပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဦးမင်းဒင်နဲ့ အဲဒီသီချင်းအကြောင်း တလောကပဲ ပြောမိကြသေးတယ်
ကျိတ်ပုန်းစား ဆိုတာ အတင်းပြောကြတာလို့ ဆိုတယ်
ပြီးတော့ အဘွားအိုက မိန်းမပျိုတွေကို မဆဲပါဘူး
ဆပ်ပြာကို ဆဲတာပါ။ ဆဲတာလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်
ဖောင်စွန်းတိုင် ရေတွေစင်တာလည်း မိန်းမပျိုတွေ ရေထဲဆင်းကူးလို့ မဟုတ်ပါဘူး
အင်း အဓိပ္ပါယ်သိတဲ့သူ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သိချင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကျတော့ တကယ်တမ်း နီးနီးစပ်စပ် နားထောင်ခဲ့ရတာတောင် မရှိဘူး။ နောက်ပိုင်း မလွှင့်တော့တာလား။ မကြုံကြိုက်တာပဲလားတော့ မပြောတတ်။
တကယ်သိတဲ့သူတွေ မြို့မငြိမ်းသီချင်းတွေကို ရာဇဝင်နဲ့တကွ ရေးကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ စာအုပ်ထွက်တယ်လို့တော့ ကြားတယ်။ ရှာကြည့်ဦးမယ်။
ကျေးဇူး ကိုသင်ကာ :)
PS အဘွားက မိန်းကလေးတွေကို ဆဲတယ် လို့တော့ မထင်မိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီမိန်းကလေးတွေ ကဲနေလို့ ဟန့်တဲ့နေနဲ့ ဆပ်ပြာကို ဆဲလိုက်တာ လို့ တွေးနေမိတာ။ အဲဒီခေတ်က သမဆိုင်က ထုတ်တဲ့ ခေတ်လား ဘာလားတော့ မသိပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ပစ္စည်းညံ့လို့ ဆဲလိုက်တာ များလား ???
ကိုသင်ကာ ပြောကာမှ အတွေးတောင်ခေါင်သွားပြီ။
ဖောင်စွန်းတိုင်ပင် ဆိုတာတောင် တော်တော်နားထောင်ယူရတယ်။ ရေထဲနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကိုယ်က ဖောင်စွန်းဒိုင်ဗင်တွေ ဘာတွေတောင် ကြားနေမိတာ အစက :)